စက်, စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း CO2 လေဆာ, လေဆာစက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်း fiber လေဆာ - G.Weike
CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အက္ခရာ တင်.
CO2 သတ္တု & Nonmetal လေဆာ
CNC Router / Vibratory ဓားစက်
ဇူလိုင်လ 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသည်ထက်ပို 26000 စတုရန်းမီတာ factory.All စက်တွေ, ဥရောပသမဂ္ဂအီး authentication ကိုလွန်အမေရိကန် FDA ကလက်မှတ်နှင့် ISO 9001. ထုတ်ကုန်များယူအက်စ်အေထံရောင်းချနေကြသည်မှအသိအမှတ်ပြုကြသည်, အာကာသသုတေသနများနှင့်ရုံး 500 ကျော်စတုရန်းမီတာကိုပိုင်ဆိုင် ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, ဥရောပ, တောင်အရှေ့အာရှ, အာဖရိကစသည်တို့ထက်ပိုနိုင်ငံပေါင်း 100 နှင့်ဒေသများနှင့် 30 ကျော်ထုတ်လုပ်ဘို့ထောက်ပံ့ရေး OEM ဝန်ဆောင်မှု။
ကျနော်တို့ / ဖောက်သည်အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်ပေးဆောင်သင့်တယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာ 5-7 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဖောက်သည် '' အရပ်တွင်နေထိုင်ပါလိမ့်မယ်, 'install ကိုကူညီရာအရပျစက်စမ်းသပ်ရန်, နှင့်ဖောက်သည်လေ့ကျင့်ပေးရန်' ဆိုတဲ့ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာပေးပို့ပညာရှင်များပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဟိုတယ် / အစားအစာအခကြေးငွေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အေးဂျင့်ကသူတို့ပြသမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုလိုအပ်ပါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများအတွက်အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ် / ဟိုတယ် / အစားအစာအခကြေးငွေပေးဆောင်သင့်တယ်, သင့်ရှိုးကိုသွားနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဖောက်သည် '' ပညာရှင်များသည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ထားနိုင်ပါတယ် 24hours အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု, WeChat / WhatsApp / မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှကူညီပေးပါမည်။
LF1325L Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
LF3015L Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
LF3015C စက်မှု Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
LF3015G အပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး & နှစ်ချက်စားပွဲတင် Las ...
LF0640 Precision Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
LF1390 Precision Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ဖောက်သည် oriented, ငါတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 90 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများရှိဖောက်သည်များအဘို့အရညျအသှေးန်ဆောင်မှုများပေးလျှက်ရှိသည်။
အများဆုံးစစ်မှန်ဖြတ်တောက်ခြင်းရုပ်ပုံကိုသင်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် GWEIKE ကျက်သရေနှင့်နီးစပ်သူဖြစ်ခွင့်ပြု, သင်တို့သည်ငါတို့၏စက်အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိကြကုန်အံ့။
G.WEIKE NEW FACTORY OPENING CELEBRATION FINISHED PERFECTLY, OPEN THE NEW JOURNEY
25 ရှန်ဟိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြော်ငြာ & နည်းပညာ & ပစ္စည်းကိရိယာပြပွဲ Sign
20 Qingdao အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက် Tools များပြပွဲ
January 7, 2017 at 3:30 pm, G.WEIKE Laser new factory in Suncun industry base opening celebration was held in G.WEIKE new factory, all staff of G.WEIKE, partners, the head of th...
မတ်လ 8 -11th, 25 ရှန်ဟိုင်း Int '' ကြော်ငြာ၏4ရက် & နည်းပညာ & ပစ္စည်းကိရိယာပြပွဲ seccessfully ကောက်ချက်ချထားပါတယ်ဝင်ရောက်ပါ။ အဆိုပါကြော်ငြာပြပွဲကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ် ...
စက်ရုပ်ဖြတ်တောက် fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, စက်နှင့် 3D ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်အော်တိုပိုက်ဖိုင်ဘာလေဆာအိမ်နှင့်ပြည်ပကနေအမြောက်အများလူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အများဆုံး po ဖြစ်လာခဲ့သည် ...
© Copyright - 2010-2017: အားလုံးအခွင့်အရေး။ - နေဖြင့်ပါဝါ Globalso.com